Paaris keessatti namoonni 12 ajjeefamanii, 11 madoo taasifaman - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Siyaasa Addunyaa Paaris keessatti namoonni 12 ajjeefamanii, 11 madoo taasifaman
Paaris keessatti namoonni 12 ajjeefamanii, 11 madoo taasifaman
Rukuttaa guyyaa har’aa magaalaa Paaris keessatti geggeeffameen namoonni 12 ajjeefamanii, 11 madoo taasifamuun bekame. Namoonni ajjeefaman gaazexeessota 10 fi poolisoota 2. Gulaalan gaazexaa Cherlii Hebdoo kanniin ajjeefaman keessaa tokko. Rukuttaan kun kan raawwate sa’aa laaqanaa irratti ture.
Kanniin tankaarfii kana fudhatan namoota 2 yoo ta’an hanga ammaatti too’annaa jala hinoolle. Konkolaataan namoonni kuni ittiin dheessan gama kaaba Paarisiitti gatamee argameera. Lamaanuu AK-47 [Kilaashii] tti akka dhimma bahaniidha suuraaleen viidiyoo kan agarsiisan. Rukuttaan kuni haalaan kan qindaaye ta’uudha kan dubbatame.
Hidhattoonni kunniin afaan Faransaayii qajelatti kan dubbatan ta’uun gabaafameera. Afaan Arabaatiin ‘Allahuakbarfi haloo Nabi Muhaammad baane’ jechuun isaniis beekameera.
Tankaarfiin kuni dhaabbata maxxansaa Chaliee Hebdoo irratti kanfudhatameef haloo bayuuf akka ta’e himameera. Chaarlii Hebdoon suuraa amantaalee qeeqan heddu maxxansuun beekama. Chaarlii Hebdoon bara 2012 keessa suuraa Nabi Muhaammad xuressuufi xiqqeessu gaazexaa Denmaark irraa fudhatee maxxansuun isaa niyaadatama. Yeroo sanii kaasee gaazexessitoonni Chaarlii Hebdoo soodaa tankaarfiin irratti fudhatamuun hinhafu jedhuun marfamanii jiraataa turan.
Tankaarfiin suukkanneessaan lammiilee Faransaay irratti fudhatame, perezidaantichi biyyattii tankaarfii duudhaafi mirga preesii bilisaa biyyatti irratti fudhatame godhee kan ilaalu ta’uu ibsee, kanniin tankaarfii kana fudhatanis yeroo gabaabaa keessatti seeraaf akka dhiheessan dubbateera. Ajeechaa kana Baaraak Obaamaan, Deviid Kaameruun, Anjelaa Merkilii, bankii Muuniifi angawoonni addunyaa hedduun balaaleffatanii, deeggarsa barbaachisu hunda mootummaa Faransaayiif laatuuf waadaa seenaniiru. Manni marii Muslima biyya Faransaayiifi dhaabbileen Muslima biyyoota biroo, wonti gaazexaan Chaarlii Hebdoo baase qaanessaa ta’us, ajjeechaan raawwatame kan isaan gaddisiiseefi kan morman ta’uu ibsaniiru.
Previous articleYaaliin perezidaantii Gaambiyaa Yahyaa Jameeh fonqolchuuf godhame fashale
Next articleDaa’imman Itoophiyaa guddifachaa sobaan gara Ameerikaatti geessaa kan ture yakka hojjachuu amane